Apple Watch အတွက်သံလိုက် Dock | ငါက Mac ကပါ
ယရှေု Arjona Montalvo | | Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, NOTICIAS
La 'Magnetic Dock Base' အတွက် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ယခုအခါကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ Apple Stores တွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ဒီပုံဟာဂျာမနီရှိဘာလင်စတိုးမှဖြစ်သည်။ ယခုထုတ်ကုန်ကိုအွန်လိုင်းတွင် ၀ ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့သော Apple Stores ၏စင်များပေါ်တွင်တရားဝင်စီစဉ်ထားသည်ထက်အနည်းငယ်စော။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကပေါက်ကြားခဲ့သောဓာတ်ပုံများအရကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Jordi ကဤအကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တို့အားစာရေးခဲ့သည် ဆောင်းပါး.
ဒီဆိပ်ကမ်းမှာတောင် Apple Watch ကိုဒေါင်လိုက်ထားနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် watchOS2ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ nightstand mode ကိုသုံးဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဲဒီနောက်ဗွီဒီယိုကို unboxing နဲ့ထားခဲ့ပါ၊ ပြီးတော့ Smart watch အတွက်ဒီ dock အသစ်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ပန်းသီး။
« Magnetic Dock »ကုန်ကျစရိတ် 89 ယူရို စပိန်တွင်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအားသွင်းစက်ကိုကိုင်ဆောင်လိုသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်၊ အွန်လိုင်း Apple စတိုး စပိန်စတိုးဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်သင့်နိုင်ငံကိုဝယ်ပြီးဝယ်ပါ ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ၁ ရက်အတွင်းရနိုင်သည်.
၎င်းသည် Apple Watch အတွက်ပထမဆုံးတရားဝင်တရားဝင် dock ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ပြောခဲ့သည့်အထောက်အပံ့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် အောက်ပါ link ကိုငါတို့သည်သင်တို့မှ redirect အံ့သြစရာon မင်းကြည့်ရတာ Apple ကရောင်းလိုက်တဲ့နောက်ထပ်ဆောင်းတစ်ခုပါ။
သင့်မှာ Apple Watch ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးအေးဆေးဆေးနေမယ်ဆိုရင်ဒီအပိုဖြည့်စွက်သည် ငါတို့အိမ်လည်း ကျွန်တော်အရမ်းစျေးကြီးလို့မတွေ့ပါ ဒီကုန်ပစ္စည်းသည်အခြားထုတ်ကုန်များရှိစျေးနှုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ » Apple Watch အတွက် Magnetic Dock ကိုယခုရောင်းချပါပြီ